အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: အတိတ်ခရီးသို. ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်မိသောအခါ ၂
လမ်းလျှောက်၇င်းလမ်းပျောက်နေတယ်ဆိုတာ ညီမကိုစောင်းပြောနေတာကျနေတာပဲ ဟွန်းးးးး
သူငယ်ချင်းတွေတော့ သူတယောက်တည်း တတိ၇တာ ဟုတ်ပါဘူးနော် များလဲ တတိ၇ပါတယ် အွန်းးးးး
ဟိဟိ ပြောမယ်နော် စိတ်မဆိုးနဲ့ေ၇းထားတာ စာစီစာကုံးကျနေတာပဲ အဟက်
အခုကျောင်းမှာ ဗျ ကျောင်းက မြန်မာဖောင့်မ၇ဘူးလေ ဒါနဲ့အသစ်တင်ထားတာ တွေ့လို့ အ၇င်လာတာ ဘယ်သူမှ မမန့်၇သေးလို့ ပထမလို့အော်သွားတယ်နော်
အခုလဲ www.burglish.com ၇ဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒီလိုေ၇းနိုင်တာပေါ့ ကျေးဇူးးကြီးပါ့နော် ဟဟဟ သနားစ၇ာ ငှက်မလေးပါလား ဟ၇ိုးးးးး
ကိုမင်းအိမ်ဖြူပြောတာ မှန်ပါတယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ လမ်းခရီးမှာ အမှားအမှန် အခက်အခဲ ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံက နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်အတွက် လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုပါပဲ .... ကျွန်တော်တို့တွေ မျှဝေပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ် ....
16 June 2009 at 5:30 PM
အတိတ်လမ်းကို ပြန်လျှောက်တဲ့ ဆရာမ ပတ္တမြားခင်လို ကိုယ်တွေ့ လေးတွေ ထည့်မရေးဘူးလား ...:P
စောင်းငဲ့ပဲ ကြည့်နေတော့မှာပေါ့ ...
16 June 2009 at 6:57 PM
မျိုးဆက်သစ်ဆိုကတည်းက သူတို့လမ်းသူတို့ ဖောက်ချင်ကြတာပါဆိုတဲ့ အတွေးကို ကျွန်တော်တို့ မေ့ထားလို့ မသင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုနော်...
ကိုယ်တိုင်လည်း လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေတုန်းပဲ ထင်တယ်။ ကြိုးစားဦးမယ်
17 June 2009 at 11:36 AM
ပုတုကွေးရေ ပုတုကွေးက လမ်းမလိုဘူးလေ လျှောက်ဖို.လည်းမလိုဘူး ... ပျံဖို.ပဲလိုတာကို.. P:
မှန်၏ ကိုဒေးရေ ၊၊ အခုလိုဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးပါ၊၊
မယ်ကိုးရေ ကိုယ်တွေ.တွေ မြင်ချင်တယ်ပေါ့ ၊၊ အင်းအားလုံးက ဗီလိန်မဖြစ်ချင်ကြတော့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ် တင်ပြဖို.ခက်သားလား kwi kwi
ကိုယုယရေ မှန်ပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို.က လမ်းပြ ပြော ပြရုံပါ ၊၊ လျှောက်တာမလျှောက်တာ သူ.တို. သဘောပါ ၊၊
နေခြည်ရေ မပျောက်ပါဘူးဗျာ ၊၊
ကိုကီးရေ ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ...
“မိမိ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ လမ်းခရီး အတွေအကြုံ အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုးတွေ က နောင်လာမယ့် မျိုးဆက် အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အဖိုးနှုန်းချိုသာတဲ့ ဘ၀လမ်းပြမြေပုံ တစ်ခုလို. ယုံကြည်ပါတယ်လေ”
လမ်းပြမြေပုံလေး ဖတ်ဦးမှ ..ကိုယ်က ငယ်သေးတော့ ရှေ့ကလူတွေ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာဘဲ ကြည့်လေ့လာရမှာ :P